ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Keto Eat&Fit
လိင္, 24 နှစ်များ, ဆင်
ထိရောက်သောဆေး! ကြံပြုပါသည်။ တောင် keto eat&fit ကူညီဖယ်ရှားပစ်ရပိုလျှံ ၁၀ ပေါင်။ အသုံးပြုကာတစ်ဦးတစ်လထက်လျော့နည်း။ ယူနှစ်ခုကြီးကျယ်တဲ့နေ့၊နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း၊အစားအစာမီ။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရလဒ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်။ မငွေကြေးကိုတစ်ဦးစွန့်ပစ်။ မပြောင်းလဲစားအစာ၊အစားအဖြစ်ရှေ့တော်၌အားလုံးငါအလို)
ရာဇာ, 32 နှစ်များ, ပင့်ကူ
ရှည်လျားအချိန်ရွေးချယ်ဖို့ကိရိယာတခုအဘို့အအလေးချိန်အရှုံး။ ပေးထားသောအဆိုပါစားသုံးသူအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုက်များနှင့်ဖိုရမ်များအဘို့အရွေးသေးပါ keto eat&fit။ ယခုငါသိငါဖန်ဆင်းသောညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ! ဖယ်ရှားပစ်တယ်၏၂၅ ကီလိုဂရမ်။ အသုံးပြုဘို့အတောင်ခြောက်လ။ စီရင္ခ်က္ကိုအတွက်ခုနစ်ကာလရဲ့အဆုံးမှာအသီးအသီးတစ်လသင်တန်း။
မြိုင်, 38 နှစ်များ, ဆင်
လေ့လာသင်ယူအကြောင်း keto eat&fit ငါ့အနည်းပြကာယဗလမယ်။ အကြံပြုရန်ဤကိရိယာကိုအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားပစ်ရအဆီ၏။ ယူတောင်နေ့တိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတစ်လကို။ အဆိုပါရလဒ်သည်။ ဆုံးရှုံးရန် ၁၅ ပေါင်။ လျင်မြန်စွာနဲ့မစိုက်။ ထို့နောက်ကြွက်သားဆောက်လုပ်ဖို့နိုင်လွန်းအလျင်အမြန်၊ကိုယ့်တဆယ်နှစ်အစည်းအဝေးများအတွက်အလုပ္။
နိုင, 57 နှစ်များ, ရန္ကုန္
အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်! နိုင်ခဲ့သည်လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ရရန်ပိုလျှံအဆီခန်းခြောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားဆောက်လုပ်ဖို့။ ကြီးမြတ်။ အစားအသောက် keto eat&fit ဖယ်ရှားပစ်တယ်၏၂၀ ကီလိုဂရမ်အဆီ။ သုံးတောင်သည်နှင့်အညီသောအကြံပြုချက်များအတွက်အသုံးပြုသူသုံးတောတစ်နေ့လျှင်။ အတွက်လာမည့်နှစ်လ။ တနင်္ဂနွေမှတစ်ချိုးယူပါ။ အဆိုပါရလဒ်သည်စူပါ! အဘယ်သူမျှမဆီဥ၊အချို့သောကြွက်သား။ အရာအားလုံးသွားအဖြစ်စီစဉ်ထား။
ကွင်းဆက်, 26 နှစ်များ, Kostroma
အမိန့် keto eat&fit တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ယူမှသာအဌမနေ့။ သည်အထိငါသည်မြင်သောအဆိုပါကိရိယာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ နံနက်ယံ၌၊ဖိုင်ထွက်အလေးချိန်သို့မဟုတ်အနုတ်ငါးပေါင်။ ငါသည်အကြီးမြတ်ခံစားရ။ အဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ အရာအားလုံးဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းစွာ၊ငါနောက်ဆုံးတော့တက်လာနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောကိရိယာတခုအခါ၊သင်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းနှင့်အတူ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် Keto Eat&Fit